Vary, tsiparifary… | NewsMada
Mbola tsy fanombohan’ny fampielezan-kevitra fa fanombohan’ny fametrahana ny antontan-taratasim-pilatsahan-kofidin’ireo kandidà ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena, eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny omaly. Mety hisy ve ny hihintsana avy hatrany ? Ho hita eo fa raha ny fanambarana nataon’ny HCC, miainga avy amin’ny lisitry ny antoko politika miorina ara-dalàna, nampitain’ny minisiteran’ny Atitany, ny 30 jolay teo, ny fanamarinana tsy maintsy hataon’izy ireo.
Hatramin’ny omaly hariva, antoko iray no hita ao amin’ny tranonkalan’ny HCC fa nahatafapetraka ara-dalàna ny antontan-taratasiny, ny antokon’ny kandidà zandriny indrindra, Rajoelina Andry, «Tanora malaGasy Vonona» (TGV). Azo itarafana ny fahavononany sahady ? Asa fa ny azy aloha izany izao no hita ho mitana ny lohalaharana amin’izany lisitry ny kandidà izany. Fahavononana ! Toe-po goavana tena ilaina hiatrehana ny fanarenana izao firenena mahantra dia mahantra, latsaka an-katerena, izao izany.
Mbola mihainohaino, miandriandry inona ny sasany ? Misy amin’izy ireny anefa ny efa saika nahenika ny Nosy, nitety faritra maro. Nitokantokana ity karazana fotodrafitrasa rehetra ity, izay tsy an’iza fa an’ny fanjakana, an’ny vahoaka, kanefa nohararaotiny nisehosehoana sy nizahozahoana. Asa, mihevitra ny olona ho inona angaha ? Hita sy tsapa izao anefa fa ady an-kafetsena izany. Efa azo itarafana ny toetrany sahady koa izay.
Fa misy koa karazana kandidà toa mitsapatsapa, na manandranandrana ka zary anaovan’ny olona “fanalàna azy”, araka ny fitenin-jatovo fotsiny, araka ny hita ao anatin’ireny tambajotran-tserasera ireny. Misy vitsivitsy maromaro izy ireny, araka ny hita. Fa angaha kitsapatsapa na andranandrana ity raharaham-pirenena ity ?
Be ny azo ambara, maro ny azo lazaina. Hanomboka ity raharaha goavana ity ka ho hita eo ny fandehany. Eo na izao indrindra no tena ilana ny vahoaka mpifidy hahay hanokatra ny masony, sy hampalady ny sofiny ka hahalala hanavaka ny vary amin’ny tsiparifary. Iankinan-java-dehibe amin’ny hoavin’ny firenena mantsy ity fifidianana filoham-pirenena ity.